Umxube wembewu othengisa imbewu ethe nkqo,eyona mbewu ilungileyo yesidudu samandongomane / iimbewu
Kusetyenziswa umatshini wokuxuba imbewu okuziinkozo kwifama Ukudibanisa ifilimu yembewu yengqolowa,imbewu yamandongomane,imbewu yekotoni,imbewu yengqolowa,imbewu yeentyatyambo, imbewu yentsimi,imbewu yemifuno,kunye nenye inkqubo yokumitha yokuphucula umgangatho wembewu,ukucacisa ngokulula ngokuchanekileyo, ukugcina imbewu, imbewu yokuthintela izifo, i-anti-pest kunye nokuphucula ukubonakala kwembewu yayinefuthe elibalulekileyo.yona nto ibhlunga kakuhle yamandongomane kwaye imbewu ihlala isetyenziselwa ukuxuba imbewu yesityalo kunye nesikhunta,amayeza okubulala izitshabalalisi,isichumisi sesondlo esincinci,umlawuli wokukhula kwezityalo,amabala okanye izixhobo zokuzalisa iiarhente zembewu,
Umgangatho ophezulu umatshini wembewu ojija Luhlobo olunye loomatshini basezifama, Umatshini wokuxuba imbewu yokuguqula ingqolowa uhlala usetyenziswa ukuxuba imbewu yesityalo kunye nesikhunta,amayeza okubulala izitshabalalisi,isichumisi sesondlo esincinci,umlawuli wokukhula kwezityalo,amabala okanye iarhente yokugcwalisa imbewu ye-arhente yembewu.Botshwe ngembewu ngaphandle,ukuze kufezekiswe imbewu kwi
Ubungqingqwa beempawu ezibuyiselwayo, phucula ukuxhathisa, ukuxhathisa isifo,ikhawulezisa ukuhluma, khulisa ube yimbewu,
yandisa imveliso,ukuphuculwa komgangatho wetekhnoloji yembewu. Kubonakalisiwe okunokuqinisa ifilimu ngokukhawuleza, kwaye akulula ukuwa.
Umatshini we-blender wembewu wenziwe ngentsimbi eqhelekileyo okanye ngentsimbi engenabala. Ilungele uluhlu olubanzi lwezinto ezinje ngeenkozo, ukutya kwezilwanyana, umgubo owomileyo kunye nembewu. Umatshini wokuxuba imbewu yeenkozo unokuhlaziywa ngokwemfuno zabathengi.unokukhetha uhlobo oluthe nkqo okanye uhlobo olu tyaba.Amandla omatshini oxuba imbewu angaba yimoto yombane,Injini yepetrol,Injini yedizili njl.
Iimpawu zokuxuba imbewu yembewu
1. Umxube wembewu wengqolowa wentengiso uyenziwa ngokuyinyumba ngentsimbi, ukumelana nokudumba.
2. Ukunxitywa kwembewu kusetyenziswa amaziko obuchwephesha obutsha.
3. Ukusetyenziswa kokudibanisa ixesha elide kwembewu yemigqomo kumphezulu wembewu ngaphandle kokonzakala,ifilimu ekhawulezayo
4. Idrum yokuxuba imbewu ayisiyiintsalela, umatshini wokucoca lula.
Ukuchazwa komxube wembewu yokutya okuziinkozo
Umzekelo VTZC500 VTZC1000 VTZC2000
Amandla (kw) 1.5 2.2 3
Ixabiso lokupheka 97% 97% 97%
Ireyithi ephukileyo ≤ 0.1% ≤ 0.1% ≤ 0.1%